ကာဂျစ္စတန်ကို နိုင်ပါ့မလား မြန်မာ??? - Sports Gabar
ဒီနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန်(၉)နာရီတိတိမှာ ကာဂျစ္စတန်အသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ကစားကြမယ့် (၂၀၂၂) ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲရှိတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ဘဝတူတွေဖြစ်နေပြီး နိုင်ပွဲမရရှိကြသေးဘဲ အုပ်စု အောက်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေကြပါတယ်။
တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ ကာဂျစ္စတန်၊ ဂျပန် နဲ့ မြန်မာတို့ပါဝင်တဲ့ အုပ်စု(F)မှာ တာဂျစ်ကစ္စတန် အသင်းက (၂)ပွဲကစား၊ (၂)ပွဲးလုံးအနိုင်ရရှိထားပြီး အုပ်စုထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေပါတယ်။ အာရှထိပ်သီး ဂျပန်ကတော့ မြန်မာအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသာ ကစားထားရသေးပြီး ရမှတ်(၃)မှတ်နဲ့ အုပ်စု ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတာပါ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ မြန်မာအသင်းကတော့ (၂)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ နိုင်ပွဲမရရှိထားသလို၊ ရဂိုးလည်း တစ်ဂိုးမှ မရှိတဲ့အတွက် အုပ်စုအောက်ခြေမှာ ပြားပြားဝပ်နေပါတယ်။
ကာဂျစ္စတန်ကတော့(၁)ပွဲသာကစားထားရသေးပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာရဲ့အထက် မှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာအသင်းအတွက်က နိုင်ပွဲရဖို့ ပိုမို အရေးကြီးနေပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဖိအားတွေအောက်ကို ကျရောက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ခက်တာက လက်ရှိမြန်မာအသင်းရဲ့လူစာရင်းဟာ ကာဂျစ္စတန်အသင်းကို အနိုင်ရဖို့ တောင့်တင်းတဲ့အနေအထားမှာ ရှိမနေတာပါပဲ။
အားကိုးရတဲ့တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့ ဒဏ်ရာအခြေအနေတွေကြောင့် လွဲချော်မှာဖြစ်သလို အဓိက ကစားသမားအောင်သူကလည်း အကင်းမသေသေးတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ ကစားရမှာပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာအသင်းရဲ့အနေအထားက မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ပွဲတုန်းကလောက်တောင် အခြေအနေမဟန်တဲ့ ကိန်းဆိုက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကစားရမှာကလည်း ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ ဘစ်ရ်ှကပ် မြို့မှာဆိုတော့ ပြိုင်ဘက်အသင်းအနေနဲ့ အိမ်ရှင်ပရိသတ်ရှေ့မှောက်မှာ အနိုင်ကစားဖို့ကိုပဲ အားထုတ်လာမှာသေချာပါတယ်။
မြန်မာနည်းပြကြီး မီယိုဒရက် ကတော့ ကာဂျစ္စတန်နဲ့ပွဲမှာ တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ အောင်သူတစ်ဦးတည်းကိုသာ အားကိုးနေရတဲ့ အစုအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာရဲ့တိုက်စစ် အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာ စိုးရိမ်စရာကောင်းနေတာတော့အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းအရတော့ မြန်မာဟာ ကာဂျစ္စတန်နဲ့ ကွာဟမှုသိပ်မရှိသလို အနိုင်ကန်မယ်ဆိုရင်လည်း မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ အဓိက စကားပြောသွားမှာက နည်းပြကြီး မီယိုဂရက်ရဲ့နည်းဗျူဟာဖြစ်ပြီး မြန်မာကစားသမားတွေရဲ့နိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြမှုကလည်း ပွဲရဲ့အဖြေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကာဂစ်ြစတနျကို နိုငျပါ့မလား မွနျမာ???
ဒီနညေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ(၉)နာရီတိတိမှာ ကာဂစ်ြစတနျအသငျးနဲ့မွနျမာအသငျးတို့ကစားကွမယျ့ (၂၀၂၂) ကမ်ဘာဖလားခွစေဈပှဲရှိတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ နှဈသငျးစလုံးဟာ ဘဝတူတှဖွေဈနပွေီး နိုငျပှဲမရရှိကွသေးဘဲ အုပျစု အောကျဆုံးမှာ ရပျတညျနကွေပါတယျ။
တာဂဈြကစ်စတနျ၊ မှနျဂိုလီးယား၊ ကာဂစ်ြစတနျ၊ ဂပြနျ နဲ့ မွနျမာတို့ပါဝငျတဲ့ အုပျစု(F)မှာ တာဂဈြကစ်စတနျ အသငျးက (၂)ပှဲကစား၊ (၂)ပှဲးလုံးအနိုငျရရှိထားပွီး အုပျစုထိပျဆုံးမှာ ရှိနပေါတယျ။ အာရှထိပျသီး ဂပြနျကတော့ မွနျမာအသငျးနဲ့ပှဲစဉျတဈပှဲသာ ကစားထားရသေးပွီး ရမှတျ(၃)မှတျနဲ့ အုပျစု ဒုတိယနရောမှာ ရပျတညျနတောပါ။ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျးပဲ မွနျမာအသငျးကတော့ (၂)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ နိုငျပှဲမရရှိထားသလို၊ ရဂိုးလညျး တဈဂိုးမှ မရှိတဲ့အတှကျ အုပျစုအောကျခွမှော ပွားပွားဝပျနပေါတယျ။
ကာဂစ်ြစတနျကတော့(၁)ပှဲသာကစားထားရသေးပွီး ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ မွနျမာရဲ့အထကျ မှာရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ မွနျမာအသငျးအတှကျက နိုငျပှဲရဖို့ ပိုမို အရေးကွီးနပွေီး ရှုံးနိမျ့ခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ဖိအားတှအေောကျကို ကရြောကျသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။ ခကျတာက လကျရှိမွနျမာအသငျးရဲ့လူစာရငျးဟာ ကာဂစ်ြစတနျအသငျးကို အနိုငျရဖို့ တောငျ့တငျးတဲ့အနအေထားမှာ ရှိမနတောပါပဲ။
အားကိုးရတဲ့တိုကျစဈမှူး ကြျောကိုကိုနဲ့မောငျမောငျလှငျတို့ ဒဏျရာအခွအေနတှေကွေောငျ့ လှဲခြျောမှာဖွဈသလို အဓိက ကစားသမားအောငျသူကလညျး အကငျးမသသေေးတဲ့ ဒဏျရာနဲ့ ကစားရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာအသငျးရဲ့အနအေထားက မှနျဂိုလီးယားနဲ့ပှဲတုနျးကလောကျတောငျ အခွအေနမေဟနျတဲ့ ကိနျးဆိုကျနပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကစားရမှာကလညျး ကာဂစ်ြစတနျနိုငျငံ ဘဈရျှကပျ မွို့မှာဆိုတော့ ပွိုငျဘကျအသငျးအနနေဲ့ အိမျရှငျပရိသတျရှေ့မှောကျမှာ အနိုငျကစားဖို့ကိုပဲ အားထုတျလာမှာသခြောပါတယျ။
မွနျမာနညျးပွကွီး မီယိုဒရကျ ကတော့ ကာဂစ်ြစတနျနဲ့ပှဲမှာ တိုကျစဈဖှငျ့ကစားသှားမယျလို့ပွောကွားထားပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ အောငျသူတဈဦးတညျးကိုသာ အားကိုးနရေတဲ့ အစုအဖှဲ့နဲ့ မွနျမာရဲ့တိုကျစဈ အလုပျဖွဈပါ့မလားဆိုတာ စိုးရိမျစရာကောငျးနတောတော့အမှနျပါ။ ဒါပမေဲ့ ခွစှေမျးပိုငျးအရတော့ မွနျမာဟာ ကာဂစ်ြစတနျနဲ့ ကှာဟမှုသိပျမရှိသလို အနိုငျကနျမယျဆိုရငျလညျး မဖွဈနိုငျစရာအကွောငျးတော့မရှိပါဘူး။ အဓိက စကားပွောသှားမှာက နညျးပွကွီး မီယိုဂရကျရဲ့နညျးဗြူဟာဖွဈပွီး မွနျမာကစားသမားတှရေဲ့နိုငျလိုစိတျပွငျးပွမှုကလညျး ပှဲရဲ့အဖွဖွေဈသှားနိုငျပါတယျ။
Previous Article တန်းဆင်းဇုန်တိုက်ပွဲမှာဖျာဝင်ခင်းနေတဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ဘာတွေမှားနေလဲ???
Next Article ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ မက်ဆီ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးတာလဲ?